Izindatshana zikaMichael Peggs ku Martech Zone |
Imibhalo nge UMichael Peggs
UMichael Peggs ungumsunguli we IMarccx Media, i-ejensi yezentengiso yedijithali egxile ku-SEO naku-Marketing Marketing. Ngaphambi kukaMarcxx, uPeggs wasebenza kwaGoogle kwezentuthuko yebhizinisi, wenza imidiya yedijithali nobambiswano lokukhangisa. Ubuye abe yi-blogger ne-podcaster, ephethe i-iTunes Top 10 New & Noteworthy Podcast You University.
NgoLwesine, Septhemba 1, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UMichael Peggs
Njengoba imithombo yezokuxhumana iqhubeka nokuqhuma, izinkampani zisemfuno eguqukayo yezindlela ezintsha zokwabelana ngokuqukethwe. Esikhathini esedlule, amabhizinisi amaningi abambelela kubhulogi kuwebhusayithi yawo, enengqondo: Ngokomlando bekuyindlela eshibhile, elula, futhi esebenza kahle kakhulu yokwenza ulwazi lomkhiqizo. Futhi ngenkathi ukwazi kahle igama elibhaliwe kuhlala kubalulekile, ucwaningo lukhombisa ukuthi ukukhiqizwa kokuqukethwe kwevidiyo kungumthombo ongasetshenziswanga. Ngokuqondile, ukukhiqizwa kwe- 'live